Cinwaan IP shakhsi ah 192.168.8.2 waxaa loo wakiishay mashiin ka dhex jira shabakad ku soo biirtay & si dhakhso leh looma heli karo in lagu ugaadhsado shabaq. Si loo suurtageliyo keenista cinwaanada IP-ga gudaha ururada & shabakadaha, cinwaannada la habeeyay ayaa la sameeyay. Waa dadaal la'aan in la aqoonsado cinwaanka IP-ga iyada oo la sharraxayo sawir dhab ah.
IP 192.168.8.2 waa IP gaar ah oo lagu hayo adoo adeegsanaya konsole-hayaha maamulka ee router-yada. Tan lagu daray IP-yada dheeraadka ah ee lamidka ah 192.168.123.1, 192.168.77.1, 192.168.8.1, iwm gabi ahaanba waxaa loo aqoonsan yahay heerka caalamiga ah ee IP-yada router. Sidoo kale waxaa loo yaqaan "IP Default Gateway".
Cinwaanka IP-ga https://192.168.8.2 waxaa lagu duubayaa Hay'adda lambarrada loo qoondeeyay Internetka ee IANA oo ah qayb ka mid ah 192.168.8.0/24 shabakadaha la habeeyay. Farqiga u gaarka ah cinwaanka IP-ga looma qoondeynin koox gaar ah qof walbana wuu isticmaali karaa cinwaanka IP-ga iyadoon heshiis laga helin diiwaanka maxalliga ah ee internetka sida lagu sharraxay 1918 RFC, oo u gaar ah cinwaanka IP bulshada.
Helitaanka Maamulka Bogga 192.168.8.2
Si fudud u qor 192.168.8.2 sanduuqa cinwaanka ee biraawsarka webka. Waad shaqaalayn kartaa bogga maamulka & xitaa waxaad hubin kartaa galitaanka Passkey. Adoo garaacaya xiriirka 192.168.8.2 waxaad sidoo kale dib u soo qaadan kartaa logon.
Intaa waxaa sii dheer waxaad heli doontaa dhammaan natiijooyinka raadinta ee cinwaanka IP-ga gaarka loo leeyahay 192.168.8.2. Haddii aad raadineyso inaad furto soo gelitaanka mootooyinka bilaa-waayirka ah, fiilada gelitaanka, ama modemka waxaad uga faa'iideysan kartaa adoo ku garaacaya xiriirka. Loogu talagalay TP Link, D-Link, ama Netgear wireless router magacyada adeegsada ama furaha sirta ah ee ugu faa iidada badan waa 'set' ama 'admin', waxaad sidoo kale dib uheli kartaa qaabka caadiga ah ee dhanka dambe ee mashiinka. Haddii tani aysan shaqeyn, markaa waxaad si fiican u dooran kartaa inaad dib u dhigto router-yada. Si tan loo sameeyo waa inaad riixdaa oo aad haysataa burooyinka dib u dajinta muddo ku dhow 20 ilbidhiqsi. Ka dib dib-u-dejinta goobaha warshadda & waxay kuu oggolaaneysaa inaad ku soo gasho faahfaahinta lagu arkay dhejiska.
Cinwaanka IP-ga 192.168.8.2 waxaa lagu duubay Hay'adda Lambarka Qoondaynta ee IANA qayb ahaan shabakad gaar loo leeyahay 192.168.8.0. Cinwaanka IP-ga ee gaarka loo leeyahay looma qoondeynin hal bulsho oo xaddidan, marka lagu daro ISP, qof walbana wuu isticmaali karaa cinwaankan IP iyada oo aan la isku raacsaneyn diiwaanka internetka ee gobolka.
Si kastaba ha noqotee, xirmooyinka IP-ga ee laga soo qabtay meelo gaar loo leeyahay laguma gudbin karo internetka guud, sidaas darteed haddii shabakad gaar loo leeyahay ay rabto inay ku biirto internetka, waxay u baahan tahay in laga gaaro cinwaanka cinwaanka shabakadda (sidoo kale loo yaqaan NAT) albaabka, ama server wakiil.
Albaabka sawirka NAT wuxuu noqon karaa router wireless ama isku xiran oo aad ka heshay ganacsade xayeysiis ah. Cinwaanka IP-ga ah ee agabkan ee isku xirka shabakadda oo u dhexeysa 192.168.8.0/24 wuxuu inta badan noqon karaa 192.168.8.254 ama 192.168.8.1 oo ku tiirsan isha. Xiriiriyaha marinka websaydhka waa inuu ahaadaa mid marin looga heli karaa hab maamuuska wareejinta 'Hypertext Transfer Protocols' HTTP kale borotokoolka Wareejinta 'Hypertext Transfer Protocol' Haynta HTTPS. Tijaabinta tan waxaad u baahan tahay inaad gasho sanduuqa cinwaanka 'http: // ip address' ama 'https: // ip address' ee shabakadda aad dooratay oo la mid ah Google Chrome ama Mozilla Firefox ku soo gal magaca isticmaalaha & PW-yada uu soo jeediyo bixiyahaagu .